Imilomo iyavunana ekutheni abadeshi bahlulelwa ngenye indlela – Bayede News
Imilomo iyavunana ekutheni abadeshi bahlulelwa ngenye indlela
ININGIZIMU Afrika inomlando omude wobandlululo. Lo
Posted on 03/12/2018 06/12/2018 by Bayede-News
ININGIZIMU Afrika inomlando omude wobandlululo. Lo mlando uhlasimulisa umzimba futhi kwabanye uhamba uhambe ulokhu ubuya emqondweni ngezinto abazenzayo nezenziwa kubo qobo. Akumangazi uma uzwa kuba nokuvungama nxa kunemibiko yokubulawa kwabantu ngoba kuthiwa bekucatshangwa ukuthi bayizindangala noma bajivazwe babizwe ngezinkawu, leli lokuba aboHlanga babizwe ngamakhafula-ke lona lenza abantu badwebe umugqa uvundle kabili.
Ucwaningo kanjalo neqiniso elibonakala nsuku zonke liveza khona ukuthi lapha enqubweni yobandlululo sengathi ilumbo ladla umninilo ngoba laba ababeluqhuba nabo bagcina sekubatinyele sebemabokoboko. Lapha ezindaweni zokusebenza kuba ngamahloni usuzwa izizukulwane zalabo ababeqhuba ubandlululo sezizama ukukhuluma izilimi zabomdabu. KwaNgqondonkulu kuye kuze kube yihlaya lapho abadeshi nabezinye izinhlanga benza konke okusemandleni ukuze ‘bafane naboHlanga’ noma bezama ngakho konke ukuveza ukuthi bona abafani nalabo ababeqhuba ubandlululo. Iningi kusuke kuyizingane ezabe zingazi nokuthi yini inqubo yobandlululo kepha zizuzile kuyo njengezindlamvuzo zalabo abaqala baqhuba ubandlululo. Lesi sizukulwane sivame ukugxekwa ngokuthi sinesimomqondo sokuzuza kwabaMhlophe.
Khona lapho aboHlanga okwabe kuvele ukufa kufakwe kubo bona babukeka beseyizinkubela kokuningi. Echitheka ngalokho ayekubona kwenzeka kwaboHlanga eminyakeni yakhe, umufi nesigomagoma somzabalazo uMnu uSteve Biko waphawula wathi “Isikhali esinamandla esiphethwe ngumcindezeli ngumqondo womcindezelwa,” Nembala yize sekwaphela iminyaka aguqa uBiko lesi sikhalo nesici sisakhulunywa njengoba kusekhona ukukhuluma kokuthi lapha kwaboHlanga indaba yonakale kakhulu emqondweni. Akukhathali noma abanye befunde bagogoda kepha luhlala luhlale lutshikize uhlanga lokuthakathwa lapho ingulube isibuyela odakeni. Iningi laboHlanga lisazibona lingaphelele nxa lingakwazi ukukhuluma isilungu. Empeleni isiNgisi sesaba wuphawu lokwehluka nokuba ngcono. Uzwe abanye benganakile bencoma into enhle ethengiwe noma eyenziwe, athi umuntu ‘namuhla sizodla njengabelungu’. Le nkulumo ingeqapheleke kepha ithi okungcono ngokwabelungu nokumele kubukelwe kubo.
Kulezi zinsuku kube nombiko owenze ababecindezelwe kanye nalabo abayizizukulwane zabacindezeli baba sematheni. Udaba beluthinta uSotswebhu weqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance uMnu uJohn Steenhuisen nokuvele ukuthi akanazo izicucu ezedlula ibanga likamatikuletsheni. Esimweni esejwayelekile udaba lokungabi nomatikuletsheni kosopolitiki aluyona into ebitheni nokho lokhu kuguquke ngesikhathi iningi lamaqembu aphikisayo belihlaba lihlikize lapho kuvela ukuthi abaholi nezinye zezisebenzi zikaHulumeni ezihlobene neqembu elibusayo ziphethe nje kepha azinazicucu.
Uteku beluba lukhulu nxa kukhulunywa ngabaholi abanjengoMnu uZuma obenguMengameli nongafi hli ukuthi wagcina ebangeni lesine. NgoNcwaba nonyaka iDA ibhoke yakhahlela lapho kuvela ukuthi uMnu uVelile Mkhothwana ophethe ihhovisi likaMeneja kaMasipala uMfuleni eGoli unomatikuletsheni nje kuphela. Umholi weDA kule ndawo uMnu uKingsol Chabalala uthe lo Masipala awugudluze uMkhothwana ngokushesha ufake umuntu onezicucu zomsebenzi.
Udaba lwezicucu kuDA luqhamuke kungalindelwe njengoba luvuke phakathi kulo iqembu ngesikhathi ubuholi balo KwaZulu-Natal ngaphansi kobuholi bukaMnu uZwakele Mncwango beseka isiphakamiso esenziwe yi- Independent Commission for the Remuneration of Public Offi ce Bearers’ eholwa nguMehluleli uCJ Musi ebesithi amalungu eSishayamthetho, amalungu ePhalamende, amakhansela kumele babe okungenani neqhuzu lemfundo ethize ukuze bakwazi ukuqashwa ezikhundleni eziphezulu ezakhiweni zomphakathi. Echaza ngalokhu uMncwango uthe lokhu kuyoqinisekisa ukuthi akubi negebe phakathi kwabashaya imithetho kanye nokweluswa kokusebenza kwayo: “Inkinga wukuthi thina esimele umphakathi asiziqondi kahle izinqubomgomo, ngakho-ke sethembele kubantu okufanele basebenze. Ukufunda kuzothuthukisa uHulumeni wethu, njengoba imfundo isiza ezingeni lokucabanga,” kubeka uMncwango.
Isiphakamiso sikaMncwango silandela isincomo esiqhamuka ku-Independent Commission for the Remuneration of Public Offi ce Bearers, nesiphakamisa uguquko olunqala emalungwini eSishayamthetho, ePhalamende nasezikhulwini eziphezulu. Encwadini ebhalelwe izishayamthetho leli phephandaba eliyibonileyo uma kuwukuthi igcina yamukelwe baningi abangahle babe senkingeni kuwo wonke amaqembu. Ngokwencwadi ethunyelwe nguMehluleli uMusi Nesihloko Esithi : Request for information under section 8 (3) of the Independent Commission for the Remuneration of Public Offi ce Beares Act , 1997, izishayamthetho zilindeleke ukuba ziphawule kulezi zincomo ezenziwe yiThimba lePhalamende (Parliamentary Task Team ). Khona lapho izishayamthetho zelulekwe ukuba ziphawule ngalezi zincomo lungakedluli usuku lamhla zingama-23 kuLwezi kophezulu.
Ngokwesiphakamiso uSotswebhu weqembu elikhulu kwaphikisayo kumele abe ngumuntu oneziqu nolwazi olunzulu. Umsebenzi wakhe kuthiwa uhlanganisa lokhu okulandelayo: ukuba ngumkhulumeli ophezulu wezindaba eziqondene nenhlangano ezithinta ukusebenza kwePhalamende futhi alawule ukuzibandakanya kweqembu ePhalamende ngokuthi aliqondise futhi asekele amalungu.
Ngokwezifundo kuphakanyiswe ukuba abe nalokhu okulandelayo; iqhuzu kwezepolitiki (political science), kwezomthetho, kwezamabhizinisi, kwezomnotho noma kwezobuntu (humanities). Akuseyona imfi hlo ukuthi uSteenhuisen akanalo iqhuzu njengoba agcina kumatikuletsheni nokusho ukuthi uma lokhu kuphasiswa uyobe usephandle. Akayedwa kulokhu ngoba noMnu uJackson Mthembu naye usendaweni ecishe ifane njengoba kuvela ukuthi unomatikuletsheni kuphela. Uthi walunguza kwaNgqondonkulu kepha kwangahlangana njengoba axoshwa ngenxa yezombusazwe. Bephendula ekusolweni okubhekiswe kuSteenhuisen, abaningi ebuholini beDA bathe amava nobunjalo kukasotswebhu omkhulu kuyasivala isikhala sokungabi namfundo ephakame.
Okhulumela iDA uMnu uSolly Malatsi usole labo abathi kumele abe nezicucu “ngokuhaqwa kokuba neqhuzu thizeni lemfundo”. UMalatsi uqhubeke wathi: “Kuwukuzikhethela komuntu ukuba aqhubeke afunde ukuze azithuthukise. Okusemqoka ikhono ngabasimele siwumphakathi ukwenza umsebenzi ngeqophelo eliphezulu okukhombisa ukuzimisela ngenhloso yokufeza okuqondiwe okuwukwakha iNingizimu Afrika eyodwa yawo wonke umuntu.”
USteenhuisen naye uziphungele wavika ngoMthethosisekelo wezwe iSigaba-47 ovumela ukuba noma yimuphi umuntu aqokelwe ukuba ilungu lePhalamende enze imithetho futhi amele abantu. “Uma uqala ukhuluma ngohlobo oluthile lokufunda into oyenzayo uvimbela izakhamuzi enqubeni yokwakha imithetho nasekumeleni umphakathi.
“Ngicabanga ukuthi kungaba yihlazo ngoba ungagcina unezifundiswa, ezingamaphesenti ambalwa eNingizimu Afrika ezingakwazi ukuthi ziye emanyuvesi zizuze neziqu zithathe zonke izinqumo ngezwe. Angicabangi ukuthi lokho kuyidemokhrasi ephilile,” kusho uSteenhuisen.
Udaba lukaSteenhuisen luqubule inkulumo mpikiswano emphakathini, bebodwa abathi kayekwe phansi ngoba kadingi zicucu ukuze ahole abantu ngobuqotho, kepha abanye bebesola iDA ngokuba bukhali nganxanye okomumese ikakhulukazi nxa kuza kubadeshi. Ephawula ezinkundleni zokuxhumana ozibize ngoBra Nape uthe: “Umfana womlungu onomatikuletsheni wenza izi-R113 000 ngenyanga ePhalamende ngenkathi owoHlanga kuleli lizwe onomatikuletsheni ulungele ukuba afake izimpahla kwaShoprite ehola imali engaphansi kweyamukelekile. Ubumbulu bedemokhrasi yethu.”
Umkhulumeli we-Economc Freedom Fighters (EFF) uDkt uMbuyiseni Ndlozi uthe ukube lolu daba beluthinta umholi woHlanga ngabe abezindaba bagiye ngethambo lakhe: “Madoda, uSotswebhu Omkhulu weDA @jsteenhuisen akanazo iziqu ezingale kukamatikuletsheni? Ukube bekungumholi woHlanga, ngabe lolu daba luchaye ngisho imiphumela yakhe kamatikuletsheni ukuze bangcolise isimo sakhe njengoSotswebhu omkhulu kulesi sakhiwo esisemqoka nesibalulekile esiyiPhalamende.”
Abanye baze bakhumbuza ngezigameko lapho umholi we-EFF uMnu uJulius Malema ayeluteku ngoba wayengenalo iqhuzu. Babuzile ukuthi ngabe abadwebi abafana noZapiro ababedweba lo mholi sakumjivaza bazokwenza yini okufanayo kuSteenhuisen. UMnu u-Esihle Lupindo uthe “Angazi noma uZapiro uzodweba ikhathuni yini ngoSteenhuisen ngendlela efanayo nayenza kuJulius.” Kwathi uNks uFlo Letoaba yena wathi: “ Ngabe uZapiro kukhona asekudwebile ngoSteenhuisen? Silangazelela kabi ukubona lobo buciko.”
Lolu daba lubukeka lusazoqhubeka ludale inkulumo mpikisano kakhulukazi ezweni lapho kunombono othi aboHlanga bahlale bebekwa njengabasolwa, izigebengu njalo njalo. Kanti ngakolunye uhlangothi kukhona umbono othi abadeshi bona bahlale bevikelwa ngenxa yebala labo nokuyinto abasho njalo abathi isewumphumela wesikhathi leli lizwe elivela kuso.